Ala Ọma Jijiji Abụọ Siri Ike Etiti na Northwest China | Netwọk Mgbasa Ozi
Ala ọmajiji abụọ siri ike mere n'etiti China na northwest ya
Claudi ego | | Ihe gbasara ihu igwe
Ala nke Jiuzhaigou, Mpaghara Ala Ọma Jijiji
Nyaahụ, ala ọmajiji ọhara 7,0 kpalitere etiti mba ahụ, na mpaghara Tibet nke Jiuzhaigou. Na 21:19 nke obodo, 13:19 GMT. Ebe ndị njem nleta na mpaghara Sichuan. US Geological Survey na-egosi na ala ọma jijiji ahụ bụ n'ezie 6,5. Agbanyeghị, n'isi obodo mpaghara Chengdu, 300km site na epicon, enwere mmetụta nke mmetụta ya. Gọọmentị mba ahụ na-atụ ụjọ ọnwụ ihe dị ka mmadụ 100, ọ bụ ezie na ugbu a enwere mmadụ 19. Ihe dị ka ụlọ 130.000 emetụtala. Mpaghara Jiuzhaigou, nke nwere oke njem nlegharị anya site na ọdịdị ya, elebara ndị njem nleta 38.000 ndị a na-akpọpụ anya. N’etiti ndị ihe a metụtara, e nwere onye France na-eme njem nlegharị na onye Canada.
Awa ole na ole ka nke a gasịrị, n'ụtụtụ a, ala ọmajiji ọhụrụ mere na mpaghara ugwu ọdịda anyanwụ nke China, na XinJiang. "Naanị" 2.000km site na ala ọmajiji ọzọ. Nke a adịla 6,6 dị ukwuu na Richter n'ọtụtụ. Ọ mere na 7: 27 oge mpaghara, 23: 27 GMT, ma soro ya 121 aftershocks dị ka ụlọ ọrụ nlekota nke China. Ọnwa atọ gara aga otu mpaghara a emetụla ala ọmajiji 3 nke gburu mmadụ 5,5. Ka ọ dị ugbu a, ala ọma jijiji ọhụrụ a emebiworị mmadụ 8 merụrụ ahụ. Ahụ ndị China arụ ọrụla ọnọdụ mberede 30, yana 1 kachasị njọ.
1 Ala ọma jijiji ahụ dị n’etiti obodo na mpaghara Jiuzhaigou, Sichuan
2 Ala ọma jijiji nke ugwu ugwu XinJiang na mpaghara Jinghe
3 Ọkara ọdịda anyanwụ nke China na-enwekarị ala ọma jijiji
Ala ọma jijiji ahụ dị n’etiti obodo na mpaghara Jiuzhaigou, Sichuan
Dị ka ozi kachasị ọhụrụ si dị, ihe dị ka mmadụ 250 merụrụ ahụ bufere ụlọ ọgwụ, 40 n'ime ha nọ n'ọnọdụ dị njọ. Ala ọma jijiji ahụ, nke nwere omimi nke 20 kilomita, dị na China Seismological Networks center, emeela ka ọtụtụ n'ime ụjọ dị n'etiti ndị bi na ya. Ọ bụ n'otu ógbè ahụ, Sichuan, na 2008 nwere otu n'ime ala ọma jijiji kacha njọ na nke 8,0 ruru. Itule nke a bụ ihe karịrị mmadụ 90.000 n'etiti ndị merụrụ ahụ na ndị nwụrụ anwụ. Ndị mmadụ gbapụrụ n'ụlọ ha n'abalị, ụjọ jidere ha.
Onye isi ala Xi Jinping akpọọla oku ka m gbalịa ịmalite ịzọpụta ndị merụrụ ahụ, ya na praịm minista, gwara ndị otu mpaghara ka ha mee ngwa ngwa iji rụọ ọrụ enyemaka niile dị mkpa. N'ime ndị njem niile, 30.000 n'ime ha akpọpụla ebe ahụ, ọzọ 10.000 ka na-eche ịhapụ. A maara mpaghara ugwu ugwu maka ọdịda mmiri ya na usoro karst.
Na vidiyo na-esonụ ị nwere ike ịhụ eserese ikuku site na helikopta nke ala ọma jijiji na ugwu, dị ka ala mbuze.
Ala ọma jijiji nke ugwu ugwu XinJiang na mpaghara Jinghe
Na mpaghara a dị nso na Central Asia, ala ọmajiji nke abụọ akpatala mmerụ dịkarịa ala 33, mmadụ abụọ n'ime ha nọ n'ọnọdụ dị njọ. Ihe karịrị otu puku ụlọ emetụtara, nke 142 lara n'iyi. Ndị ọchịchị XinJiang kagburu ụzọ ụgbọ okporo ígwè 60. Ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ na ndị otu ahụike agaala mpaghara ihe metụtara ebe ezigara ndị ọrụ enyemaka. Entslọikwuu, blanket, uwe, wdg.
Mpaghara ala ọma jijiji nke abụọ
Ọtụtụ ndị echewo ma enwere mmekọrịta dị n'etiti ala ọmajiji abụọ ahụ siri ike mere n'oge dị mkpirikpi. Ndị Seismologists metụtara ndụmọdụ site na South China Morning post kwuru na ọ dị ka ha ahụghị mmekọrịta dị n'etiti ala ọma jijiji abụọ a priori. N’oge dị anya, ha tere aka n’ebe dị anya, ha chetakwara na ala ọma jijiji na-agakarị n’ebe ọdịda anyanwụ China.
Ọkara ọdịda anyanwụ nke China na-enwekarị ala ọma jijiji
Na mpaghara buru ibu ebe ala ọma jijiji niile mere, ọ na-enwekarị ọma jijiji n'ihi oke ọrụ ahụ. Ọ bụ n'ihi esemokwu nke nnukwu tectonic efere Asia na India. Ha na-apụtakarị n’ebe ndị mmadụ pere mpe, dịka ugwu Tibet ma ọ bụ ọzara obodo. N'ikpeazụ mgbe ha mere n'ọtụtụ ebe ndị mmadụ bijupụtara, mbibi dị ukwuu.
Kpọọ aha pụrụ iche iji cheta na ala ọma jijiji bụ ihe anyị na-enweghị ike ịmata mgbe ọ ga-eme. Mana ọ bụrụ na ibi n'ime ya, ịnọ jụụ bụ otu isi ihe. Karịsịa, chee echiche nwayọ, pụọ wee mepee ebe ọhụụ tupu ọ gbasie ike, pụọ na mgbidi, osisi, wdg.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ala ọmajiji abụọ siri ike mere n'etiti China na northwest ya
Gịnị bụ oké ifufe na-acha akwụkwọ ndụ?